Fivadiham-pitokisana: tompona «agence de voyage» iray nidoboka am-ponja | NewsMada
Par Taratra sur 22/10/2020
Efa namidin’ity lehilahy iray tompona “agence de voyage” ireo fiarany Grand Starex miisa dimy. Nangatahany hofana tamin’ireo nividy azy indray anefa, avy eo namidiny an-tsokosoko, ary tsy hita intsony izay nanjavonany. Tratran’ny polisy ihany ilay lehilahy… nivadi-pitokisana.
Nampidirina am-ponja vonjimaika, ny zoma lasa teo, rehefa nandalo fampanoavana ny lehilahy iray tompona « agence de voyage ». Nisoloky ireo mpividy ny fiarany Grand Starex miisa dimy izy rehefa nivarotra izany. Amin’ny maha tompona « agence de voyage » azy, mampiasa fiara miisa dimy izy. Taty aoriana, namidiny avokoa anefa ireo fiarany ireo ny volana desambra 2019. Mitentina 50 000 000 Ar ny iray amin’izany. Lehilahy iray ny nividy ny fiara telo amin’ireo raha olon-kafa kosa ny nividy ny roa ambiny. Nangataka amin’ireo mpividy ireo fiara indray ilay tompona « agence de voyage » hanofany ireo fiara efa namidiny. Raikitra tamin’izay fa mitentina 1 500 000 Ar isam-bolana ny hofan’ny fiara noho ilay lehilahy mila fiara hanodinany ny orinasany. Tapaka nandritra izay koa fa napetraka tao amin’ilay “agence de voyage » ihany koa ireo rehetra.
Tsy hita popoka
Nanomboka ny volana avrily teo, tsy naharay intsony ny hofan’ny fiarany ireo tompony ka nanapa-kevitra ny haka izany. Tsy hita ary tsy azo antso intsony anefa ilay lehilahy nanofa izany. Vokany, nametraka fitoriana eny anivon’ny kaomisaria etsy Analakely ireo tompona fiara miisa dimy, ny 17 septambra lasa teo. Nokarohina nanaraka izany koa ilay tompona « agence de voyage ». Nandeha ny fanadihadiana sy ny fikarohana ary voasambotra tetsy Andrefan’Ambohijanahary ralehilahy, ny alakamisy teo. Niaiky avy hatrany izy fa namidiny ireo fiara dimy nofainy. Nokarohina koa ireo nivarotany fiara. Tratra teny 67 ha tamin’io andro io ihany ny iray amin’ireo fiara. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa namidin’ilay tompona « agence de voyage » 50 tapitrisa Ar indray ny fiara ary nofainy tamin’ireo mpividy azy indray izany. « Iray volana ihany koa anefa ny nandoavany ny hofany. Efa saika tsy nomeny izany raha tsy nalaina taminy am-pitaka », hoy ny fanazavan’ny Polisim-pirenena, loharanom-baovao. Nogiazana ao amin’ny kaomisarian’Analakely ireo fiara ankehitriny.